Igwe ngwongwo ihe, Akụrụngwa ihe ngwangwa, Ngwuputa ngwangwa igwe
Ezigbo Ndị ahịa anyị
Lekwasị anya na teknụzụ nkwakọ ngwaahịa nke akụrụngwa ngwa ngwa.Design na nhazi nke ngwaọrụ ndị na-abụghị ọkọlọtọ dịka mkpa nke onye ahịa. anyị nwere ihe ịga nke ọma na-edozi ọtụtụ nsogbu ndị siri ike site n'itinye usoro ndị na-atụ egwu ma na-agụta ọnụ maka ọtụtụ ndị ahịa.
N'ịzụlite ruo ugbu a, Feiyu esonyewo ihe ngosi ahụ n'ọtụtụ oge, dị ka ngwá ụlọ, ihe mkpuchi wdg, n'otu oge ahụ, ihe ngosi ahụ yiri ya na-enye anyị nkwurịta okwu mmekọrịta dị mma n'etiti onye ahịa na anyị.
AKWỤKWỌ NDỊ EZIOKWU
Na-anabata ndị ahịa iji obi ụtọ na-eleta, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa anyị na-enweta ihu ọma na otuto nke ọtụtụ ndị ahịa n'okpuru ntụkwasị obi na nkwụsi ike, ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ndị China na ndị si mba ọzọ na-abịakarị n'ụlọ ọrụ anyị.
Shanghai Feiyu packaging machinery Co., Ltd., nke e guzobere na 2008, etinyewo aka n'ịgụ ma na-emepụta ngwá ọrụ ígwè. Kemgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị siri ike n'ịchọpụta nkà na ụzụ na nkwalite ihu ọma, Feiyu-Pack aghọwo ọkachamara na ndị na-ekesa ngwá ọrụ na Asia.
Akụrụngwa Akụrụngwa Akụrụngwa Na-agụnye Mwepụta Ngwa
Akụrụngwa ngwongwo ngwongwo na-agụta igwe mpempe akwụkwọ 1 - Ụdị ihe nkwụnye ọnụ ọnụ 1.1-Mechanical counting Nke a dị mma maka ịkwakọba obere ihe (1-12pcs / bag), na-eji oge dị anya n'etiti njikọta, ma dozie nsogbu ahụ n'ebe dị anya, mee ọnụ ọgụgụ. Ụzọ a adịghị adabere na nnukwu ọnụ ọgụgụ, ...
Akụrụngwa Akụrụngwa Nut Bolt Counting Machine Packing
Nkọwa Dị mkpirikpi Ngwá ngwongwo ngwongwo ngwongwo a na-ejikọta usoro PCC dị elu na usoro nlezianya foto, ihuenyo mmetụ na Chinese na Bekee, na ịmecha nlele, ịmepụta akpa, ndochi, akara, ịmecha na ibipụta akwụkwọ. Igwe a bụ ihe ngwakọta agwakọta, otu akụkụ bụ maka ịgụ na ...
Onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Igwe a na-adabere na nkedo, nut, beher na ihe ndị ọzọ a na-eme mgbe niile, ịmepụta ntụgharị ọnụ na nyocha nke fiber optics, nyocha nke fiber optics, na-etinye ọnụ na nyocha nke fiber optics. ihe kachasị mma bụ ịhazi, ịgụ, mbukota na mbipụta nwere ike inye. Ejiri na ...
Adreesị: No.33, Lane 3238, waiqingsong Road, Baihe Town, Ógbè Qingpu, Shanghai, China
Machine Mwepu Igbe
Igwe ngwugwu ọnụ
Nwepu ngwangwa ngwa ngwa
Ngwa nkwakọba ngwá ọrụ
Nwepu ngwangwa igwe
2 Bowls Screw Counting Machine Packing With Printer
Akụrụngwa Akụrụngwa na-agụpụta Ngwa Mwepu
Ngwongwo Akụrụngwa Akụrụngwa Na-atụkwa Ngwaọrụ Nkwado
Fasteners Packing Machine N'ihi Bolts Mkpụrụ
Ngwaọrụ nkwakọba ngwáọrụ Ngwaọrụ
Akụrụngwa Akụrụngwa Akụrụngwa - Egwuregwu Mwepụta ọnụ ọnụ
Nut And Bolt Packing Machine Na Carton
Ichekwa Mpempe akwụkwọ Na-achọpụta Ihe Maka Ma akpa ma Igbe
Copyright © Shanghai Feiyu Embedding Machinery Co., Ltd